Gbanwee akara ngosi nke folda anyị na Gnome | Site na Linux
Gbanwee akara ngosi nke folda anyị na Gnome
Nyaahụ m gara leta onye agbataobi na-eji Windows XP na kọmputa ya iji nyere ya aka na nsogbu ọ na-enwe na achọpụtara m otu folda ọ bụla na diski D: nwere akara ngosi cheesy obere na ya iji hazie ha ntakịrị.
Jiri nke a mee nke a Nautilus (Njikwa faili nke Gnome) ọ dị mfe ma anyị ekwesịghị iji ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Ihe anyi kwesiri ime bu:
1- Anyị na-ahọrọ folda anyị chọrọ ịhazi »Pịa aka nri ma pịa na akara ngosi folda.
2- Anyị na-achọ akara ngosi n'ime folda anyị .icons, ma ọ bụ anyị họrọ naanị faịlụ ọ bụla na usoro .png, .jpgma ọ bụ .svg (enwere ike iji ndị ọzọ). Ebe a i nwere ike ịhụ ụfọdụ dị jụụ ndị. Na njikere !!!
Nke a bụ otú m si ele anya 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Gbanwee akara ngosi nke folda anyị na Gnome
Ahahah echetara m na nke a bụ otu ihe mbụ masịrị m banyere Linux, na windo ọ bụ n'ezie ihe mgbu ịgbanwe nke a.
Daalụ, dị ka blọọgụ dị mma mgbe niile, m na-agbaso ya kwa ụbọchị.
I meela, ihe ndị a bụ ihe ọhụụ na - emetụta ndị ọrụ ọhụụ na ọ bụ maka ha ka m dere edemede a. 😀
Otu ihe ahụ mere m. Echetara m mgbe m lebara anya na folda nwere akara ngosi na-adịghị agwụ agwụ ma ọ ga-ewe ọtụtụ awa ebe ahụ. Heh heh heh.
Ọ bụrụ na m bụ KZKG ^ Gaara M gaara ewere kọmputa gị itinye akara ngosi nwoke nwere mmasị nwoke na Ju $ tin Bieber ma ọ bụ Jonas Sisters haha.
Eziokwu bụ na na Hasefroch ọ dị ka nke enweghị mgbagwoju anya
M wee gbuo ya dị ka nkịta .. Justin Bieber? .. Akpọla m ọnụ